Hulu ရုပ်ရှင်အသစ်နှင့်ဇွန် ၁ ရက်တွင်ပြသပါမည် - Netflix သတင်း
မိဘများနှင့်တွေ့ဆုံပါ - (အွန်လိုင်း USA မှတင်သွင်းသော Phillip V. Caruso / Universal စတူဒီယိုများနှင့် Dreamworks LLC မှဓာတ်ပုံ)
၂၀၂၀ ဇွန်တွင်ကြည့်ရှုမည့် Hulu ရုပ်ရှင်အသစ် ၅ ခု HBO MAX သည်ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့တွင်ရုပ်ရှင်နှင့်ပြပွဲအသစ် ၁၂၀ ကျော်ထပ်တိုးသည်
တနင်္လာနေ့၊ ဇွန် ၁ ရက်တွင်ကြည့်ရှုမည့် Hulu ရုပ်ရှင်နှင့်ပြပွဲအသစ် ၆၀ ရှိသည်
သငျသညျမေလကုန်မှာ Hulu အပေါ်အကြောင်းအရာအားလုံးကိုငြီးငွေ့ခဲ့ကြလျှင်, သင်ကံကောင်းပါစေ! Hulu ကဇွန်လ ၁ ရက်တနင်္လာနေ့တွင်ရုပ်ရှင်နှင့်ပြပွဲအသစ် ၆၀ ကျော်ကိုထပ်မံဖြည့်စွက်လိုက်သည်။
ကျနော်တို့အောက်က Hulu ခေါင်းစဉ်အသစ်များ၏စာရင်းအပြည့်အစုံ shared!
ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့အတွက်အသစ်သော Hulu ခေါင်းစဉ်အများစုမှာရုပ်ရှင်များဖြစ်ပြီးတကယ်ကောင်းသည့်အရာများလည်းရှိသည်။ စောင့်ကြည့်ဖို့အထူးအကြံပြုလိုတယ် မိဘများနှင့်တွေ့ဆုံပါ သငျသညျအလုံအလောက်ရဲရင့်နေလျှင်, ၎င်း၏နောက်ဆက်တွဲ Fockers တွေ့ဆုံရန်
Hulu အပါအဝင်ပိုမိုမကြာသေးမီက hits ကဆက်ပြောသည် ငါဒဏ္Amာရီပါ Will Smith, အာဒံကို Sandler ရဲ့သရုပ်ဆောင် အရွယ်ရောက်ပြီးသူများ, နှင့်နှစ် ဦး စလုံး ပျော်ရွှင်စွာပြီးနောက် N'Ever ရုပ်ရှင်များ။ စောင့်ကြည့်ဖို့လည်းအကြံပေးလိုပါတယ် မီးအတွက်တူးခြင်း သငျသညျသေးမြင်ကြပြီမဟုတ်လျှင်အဖြစ်ကောင်းစွာဂျိုး Swanberg ကနေ။
သင်အပါအဝင်လည်းဂန္ထဝင်ဖမ်းနိုင်ပါတယ် Thelma & Louise၊ ကာစီနို၊ ညစ်ပတ်အက၊ ကံ၊ နှင့် streaming များဝန်ဆောင်မှုအပေါ်ယနေ့။
အရာများ၏တီဗီဘက်မှာကြည့်ဖို့အသစ်သောအကြောင်းအရာများတစ်တန်ရှိပါသည်။ ဖြစ်ရပ်တိုင်း ကလေးဆေးရုံ ရော့ Corddry သရုပ်ဆောင်ပထမရာသီသုံးခုနှင့်အတူယနေ့ Hulu တွင်ထည့်သွင်းခဲ့သည် သူ Mike တိုင်ဆန်နက်နဲသောအရာ အရွယ်ရောက်ရေကူးထံမှ။
ရာသီသစ်ပွဲစဉ်များကိုလည်းကြည့်ရှုနိုင်သည် နာမည်ကြီးမိသားစုရန်ငြိုးထားခြင်း, ပွဲစဉ်ဂိမ်း, နှင့် သင်၏ကံကိုနှိပ်ပါ ABC ရုပ်သံရဲ့နွေရာသီ lineup ကနေ။ ဒီပြပွဲတွေကို Hulu ရုပ်ရှင်အသစ် ၆၂ ခုမှာမပြခဲ့ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ပရိသတ်တွေကအဲဒီပြပွဲတွေကိုဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုတဲ့သတင်းအချက်အလက်ကိုရှာနေတဲ့ပရိသတ်တွေရှိနေရင်အဲဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်သေးတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်, သင်တစ် ဦး လိုအပ်ပါတယ် ဟူးလူ ဒီ ၆၀ ပေါင်းပါတဲ့ Hulu ရုပ်ရှင်အသစ်များနှင့်ယနေ့ပြပွဲများကိုကြည့်ရှုနိုင်မယ်။
နယူး Hulu ရုပ်ရှင်နှင့်ပြပွဲ: ဇွန်လ 1
သူ Mike တိုင်ဆန်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ရာသီ 1,2နှင့် 3
အပေါ် & အပြင်
ချာလီ Wilson ကရဲ့စစ်ပွဲ
ညစ်ပတ်သောအက: Havana Nights
Frankenstein နှင့် Hell from the Monster
ဝမ်းသာစရာက2ပြီးနောက် N'Ever
Loch Ness တွင်ဖြစ်ပွားမှု
ရုံစားပါ: တစ် ဦး ကအစားအစာစွန့်ပစ်ပုံပြင်
အဆိုပါရိန်း 3: Homefront
နေအိမ် Roscoe Jenkins ကြိုဆိုပါတယ်
Wristcutters: တစ် ဦး ကမတ်ေတာပုံပြင်
သငျသညျအဆိုပါ Zohan နှင့်အတူရှုပ်ထွေးမနေပါနဲ့
စာရင်းထဲမှာသင်ကြိုက်တဲ့တစ်ခုခုကိုမတွေ့ဘူးဆိုရင်စိတ်မပူပါနဲ့။ Hulu ကဒီလနှောင်းပိုင်းမှာရုပ်ရှင်ကောင်းတွေပြသနေတယ် အိမ်နီးချင်းအတွက်လှပသောနေ့ အင်္ဂါနေ့၊ ဇွန် ၂ ရက်တွင်အသစ်သော Hulu မူလစီးရီးဖြစ်သော Tom Hanks ကိုသရုပ်ဆောင်မည် ဓားကိုဖြတ်ကူးခြင်း ဇွန်လ 12 ရက်နေ့နှင့် Hulu မူရင်းစီးရီးအပေါ် ချစ်ခြင်းမေတ္တာဗစ်တာ ဇွန်လ 19 ရက်နေ့တွင်။
ဘယ်အချိန်မှာအမေရိကန်ထိတ်လန့်ဇာတ်လမ်း netflix အပေါ်စတင်ပါသနည်း
၂၀၂၀ ဇွန်လတွင် Hulu ရုပ်ရှင်အသစ်များနှင့်ပြပွဲအသစ်များအတွက်အဆင်သင့်ရှိနေပါ။
နောက်တစ်ခု:၂၀၂၀ ဇွန်တွင်ကြည့်ရှုမည့် Hulu ရုပ်ရှင်အသစ် ၅ ခု
အချိန်5အမြန်ဆုံးအချိန်
ဘယ်အချိန်မှာလူငယ်နှင့်ဆာလောင်မွတ်သိပ်လေထု၏5ရာသီလိမ့်မည်
ဟင်နရီ cavill တစ် ဦး ရည်းစားရှိသည်ပါဘူး
netflix ကနေထွက်သွားသောအရာကိုအောက်တိုဘာ 2015